भारतमा चौकीदारको बहस, सबै भारतीय चौकिदार - Jhilko
भारतमा चौकीदारको बहस, सबै भारतीय चौकिदार
राजा हो या रंक सभी है यहा का चौकिदार
कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तयार
खबरदार ! खबरदार !!
महम्मद रफीले आफ्नो जमानामा एउटा मर्मस्पर्शी गीतमा संगीत भरेका थिए । चौकिदारलाई सम्बोधन गरेर बनाइएको यो गीतमा राजादेखि रंकसम्म सबै पृथ्वीका चौकिदार मात्रै हुन भन्ने गीतको आसय छ । यस्तै आसयलाई चुनावको सरगर्मीसंगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले ‘म पनि चौकिदार’ अभियानको सुरुवात शनिबारबाट विधिवत गरेका छन् ।
आगामी मार्च ३१ तारिखदेखि हुने भाारतको तल्लोसदन लोकसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मोदीले ल्याएको यो चुनावी रणनीतिलाई भने विपक्षीले चौकिदार नै चोर भएको भनेर खिल्ली उडाएका छन् । भर्खरै रफायलकाण्डमा सरकारका रक्षामन्त्रीले फायल चौकिदारकै कारण हराएको आसयको भाषण संसदमा गरेपछि मोदीको यो अभियानको खिल्ली उडाउन विपक्षी पार्टीलाइ सहज भएको हो ।
अघिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा मोदीले आफु देशको चौकिदार भएको घोषणा गरेका थिए । उनको त्यही विचारलाई व्याख्या गरेर सबै भारतीय जसले भ्रष्टाचार, सामाजिक विकृतिका विरुद्ध लड्नेहरु चौकिदार भएको भिडियो ट्वीट गरेका छन् । यसअघि कांग्रेस आई अध्यक्ष राहुल गान्धीले ‘चौकिदार चोर भयो’ भनेपछि त्यसको सर्वेक्षण गर्दा ‘चौकिदार’ को पक्षमा माहोल देखिएको र चौकीदारलाई चोर भन्दा अधिकांस त्यस पेशामा हुनेहरु रिसाएको पाइएकोले पनि यो शब्द ‘क्वाइन’ गरी ‘म पनि चौकिदार’ को नारा अघि सारेका विजेपी नेताहरुले सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले देशको प्रगतिका लागि कडा मेहनेत गर्नेहरुलाई पनि चौकीदारको संज्ञा दिँदै आज भारतका सबै नागरिकले म पनि चौकीदार हुँ भन्ने गरेको बताए । चौकीदारले पैसा र सम्पत्तिको सुरक्षा गरे झैं आफूले देशको संरक्षण गर्ने मोदीको धारणा थियो । निर्वाचनको बेलामा पाकिस्तानमा हवाइ (हावा) हमला गर्नेदेखि सफाई मजदुरको गोडा धुने क्रियाकलाप गरेर स्टण्टबाजीमा मोदी अगाडि देखिएका छन् ।
अब यो म पनि चौकिदार हुँ नाराले उल्टै विपक्षीहरुमा व्याक फायर भयो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ । अझ निर्वाचनको बेलामा महम्मद रफीको चौकीदार बोलको गीतले भाजपालाई सजिलो बनाउने त छँदैछ ।
मधेशको धापिलो राजनीतिक सरगर्मीमा घिउ थप्दैछन् ज्ञानेन्द्र शाह ?
विप्लव माथि यसरि गरिँदैछ निगरानी
पाकिस्तानमा भूकम्प: राजधानीसहित धेरै भागमा धक्का
पाकिस्तानका सेना प्रमुखले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धारकार्य सुरू गर्न निर्देशन...
पृथ्वी दिवसको ‘गोल्डनजुबली’मा कोरोना संकटको उपाय खोज्दै...
दीगो विकास लक्ष्य र पेरिस सम्झौताका लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने दु्रतगतिमा भइरहेको...
पहिलो पटक भौतिकशास्त्रीहरूले छुट्टिएका अणुहरू समात्न र...
युनिभर्सिटी अफ ओटागोका भौतिकशास्त्रीहरूले दुई छुट्टिएका (आइसोलेटेड) अणुहरूलाई एक...
माथिल्लो कर्णालीको काम छिट्टै शुरु हुन्छ : जिएमआरले
कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत्...